महाभारतमा प्रभास ! - बलिउड - साप्ताहिक
महाभारतमा प्रभास !
मिस्टर परफेक्सनिस्ट आमिर खानको ड्रिम प्रोजेक्ट महाभारतले प्रदर्शनमा नआउँँदै विश्व चलचित्र बजार तताइरहेको छ । बलिउडको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो लगानीमा निर्माण हुन लागेको यो चलचित्रका तीनवटा सिक्वेल हुने चर्चा छ । हालै मात्र अमिर खानले एउटा महत्वपुर्ण निर्णय लिएका छन् । भारतीय मिडियाका अनुसार आमिर यो चलचित्रमा बाहुवाली फेम प्रभासलाई इन्ट्री गराउन प्रयासरत छन् ।
यद्यपि प्रभासले आमिरको प्रस्ताव मानिसकेका छन् कि छैनन्, त्यो भने अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । आमिरले प्रभासलाई जसरी पनि यो ड्रिम प्रोजेक्टमा इन गराउन चाहेको बताइन्छ । जानकारहरू भन्छन्– प्रभासले आमिरको प्रस्ताव मान्ने लगभग पक्का छ । आमिरले महाभारतमा प्रभासको के–कस्तो भूमिका रहनेछ भन्ने विषयमा केही बताएका छैनन् । कतिपय भारतीय मिडियाले भने प्रभासले अर्जुनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् ।
प्रकाशित :आश्विन ३, २०७५
ग्राजुएसनमा ९ सर्ट फिल्म प्रदर्शन
बलिउड प्रवेश गर्दै प्रभास
हेमको अर्को निर्देशन
कवितामाथि हेमको नौलो प्रयोग
साराको नयाँ रोमान्स चैत्र १२, २०७५
कामसूत्र अभिनेत्रीको नयाँ रुपको चर्चा चैत्र १०, २०७५